Radio Don Bosco - Ny fahasambarana ao amin'ny Soratra Masina
Tapaka anefa izany noho ny ota. Mba handravonana izany dia nametraka lalàna Andriamanitra mba ho tandremana: ny didy folo. Taty aoriana dia nampianatra ny làlana ahitana ny hasambarana i Jesoa Kristy (cf. Mt 5, 1-12).
Raha atao amin’ny teny tokana dia ny làlan’ny fahamarinana sy fahitsiana no ahazoana ny hasambarana. Ary ao amin’Andriamanitra izay tompon’izao rehetra izao no misy azy noho izany dia tokony hatoky azy tanteraka.